Wasaaradda Amniga oo sheegtay inay ka hortageen weerarada Al-Shabaab | Banaadir Times
HomeUncategorisedWasaaradda Amniga oo sheegtay inay ka hortageen weerarada Al-Shabaab
Wasiirka Wasaaradda Amniga gudaha Xukuumadda Soomaaliya Xasan xundubeey Jimcaale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya bilihii la soo dhaafay ay ku guuleysatay inay ka hortagto weeraradii qaraxyda ahaa oo ay geysan jireen Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana taasi ay sababtay inay yaraadaaan weerarada qaraxyada ah iyo kuwa tooska ah oo ay fulin jireen.
Wasiirka Wasaaradda Amniga gudaha Xukuumadda Soomaaliya Xasan xundubeey Jimcaale waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in Ciidamada dowladda ay burburiyeen Goobihii Al-Shabaab weerarada kasoo ababauli jireen, sidoo kalena Ciidamada ay howlgalalda sii wadi doonaan.
Hadalka Wasiirka Wasaaradda Amniga gudaha Xukuumadda Soomaaliya Xasan xundubeey Jimcaale ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli degaano ka tirsan dalka ay Ciidamada dowladda ka wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Ciidamo diyaarado ku geysay Beledweyne
Next articleKulamo looga hadlayay khilaafka doorashada oo ka dhacay Muqdisho